मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुदृढीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहका लागि ११ करोडका अल्ट्रासाउण्ड - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ सुदूरपश्चिम प्रदेश ∕ मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुदृढीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहका लागि ११ करोडका अल्ट्रासाउण्ड
मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुदृढीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहका लागि ११ करोडका अल्ट्रासाउण्ड
पदमराज भट्ट सोमबार, २०७६ कात्तिक ४ गते, १०:०० मा प्रकाशित
धनगढी—सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अल्ट्रासाउण्ड हेर्ने दक्ष जनशक्ति नभएपनि महंगोमा उपकरण भित्र्याइदैंछ । प्रदेशको ८८ वटै स्थानीय तहलाई एक/एक वटा वितरण गर्नका लागि करिब साढे ११ करोड रुपैयाँ खर्चेर अल्ट्रासाउण्ड मेसिन भित्र्याउन लागिएको हो ।
मातृशिशु स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउने उद्धेश्यका साथ प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयले ८८ वटा अल्ट्रा साउण्ड मेसिन खरिद गरेर सबै स्थानीय तहलाई वितरणको तयारी गरेको छ ।
निर्देशनालयले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्टाफ नर्स र अनमीलाई तीन हप्ताको तालिम दिएर ग्रामीण क्षेत्रमा अल्ट्रा साउण्ड सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नेपाल सरकारले यस प्रकारको अभ्यास पहिल्यैदेखि गर्दै आएको छ । सुदूरपश्चिममा अल्ट्रा साउण्ड विशेषज्ञको रुपमा २ जनामात्रै रेडियोलोजिस्ट छन् । डा. होमराज पन्त र डा. निरज अर्याल रेडियोलोजिस्ट हुन । दुवै जना हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कार्यरत छन् ।
प्रदेशमा पर्याप्तमात्रामा रेडियोलोजिस्ट र रेडियोग्राफर नरहेकाले स्टाफ नर्स र अनमीलाई दक्ष बनाएर अल्ट्रा साउण्ड सञ्चालन गरिने निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सिद्धराज भट्टले बताए । ‘हाम्रो प्राथमिकता स्टाफ नर्सलाई नै रहन्छ’, उनले अगाडि थपे, ‘नेपाल सरकारले यसअघि पनि यस किसिमको अभ्यास गरिसकेको छ ।’
अल्ट्रा साउण्ड विभिन्न रोग निदानका लागि प्रयोग हुन्छ । पेटमा बच्चा भएको बेला सबभन्दा जोखिमयुक्त अवस्था अल्ट्रा साउण्डबाट पहिल्याउन सकिन्छ । यसको प्रयोगले अकालमा हुने मृत्युको संख्या घटाउन सकिने भएकाले नर्स र अनमीलाई तालिम दिंदा सीमित विषयवस्तुमात्रै केन्द्रित हुनु पर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्वास्थ निर्देशक डा.गुणराज अवस्थीले बताए । ‘स्वास्थ्य संस्थालाई अल्ट्रा साउण्ड मेसिन उपलब्ध गराउनु आफैमा राम्रो कुरो हो’, उनले भने, ‘त्यसैले महत्वपूर्ण र सीमित विषय वस्तुमा मात्रै तालिम केन्द्रित हुनु पर्दछ ।’
अल्ट्रासाउण्डमार्फत पेटमा बच्चा उल्टो, सुल्टो, माथि, तल भएको साल कतातिर छ भन्ने कुरा सजिलैसँग पहिल्याउन सकिन्छ । तालिम यिनै कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने डा. अवस्थीको सुझाव छ । सुदूरपश्चिमको मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत निर्देशनालयले अल्ट्रा साउण्ड खरिद गर्न लागेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखामार्फत सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलयलाई बजेट पठाएको थियो । अमेरिकी कम्पनी फिलिप्सको लुमीफाई ब्राण्डको अल्ट्रा साउण्ड खरिद गर्नका लागि गत असारमै सम्झौता भएको थियो । कार्तिक मसान्तसम्म अल्ट्रा साउण्ड आइपुग्ने जनस्वास्थ्य निरीक्षक भट्टले बताए । ‘निर्देशनालयले १२० दिनभित्रै सबै अल्ट्रसाउण्ड मेशिन नेपाल आइ पुग्नु पर्ने गरी सम्झौता गरेका छौं’, उनले भने ।
निर्देशनालयले प्रति अल्ट्रा साउण्ड मेसिनमा ११ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । ८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड खरिदका लागि १० लाख २४ हजार ३ सय २० अमेरिकी डलर खर्च हुँदैछ । भ्याटबाहेक सबै अल्ट्रा साउण्ड खरिदमा ११ करोड ४५ लाख १८ हजार रुपैयाँ बढी खर्च हुने निर्देशनालयले जनाएको छ । अल्ट्रा साउण्ड मेसिन नेपाल आइपुगेको दिनको अमेरिकी डलरको मूल्यको आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएकोले लागत बढ्ने भट्टले बताए । ‘किनभने, डलरको मूल्य बढ्दै गएको छ’, उनले भने । सम्झौताको आधारमा प्रतितपत्र (एलसी) गरेको जनाइएको छ ।
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा गर्भवती महिलाको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ । यदि, चुनौतीको आँकलन गर्न सक्ने उपकरण स्थानीय तहमै पुगेमा आमा र शिशुको ज्यान जोगाउन सकिने बताइएको छ । तर, स्टाफ नर्स र अनमीलाई २१ दिनको तालिम दिइसकेपछि मात्रै अल्ट्रासाउण्ड मेसिन वितरण गर्ने भट्टले बताए । उनले पहिले पनि तालिम लिएर स्टाफ नर्स र अनमीले नेपालमा अल्ट्रासाउण्ड सेवा दिने अभ्यास भइसकेकाले समस्या नहुने बताए । ‘सबै स्थानीय तहमा रेडियोलोजिस्ट आउन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘त्यसैले उपलब्ध जनशक्तिलाई दक्ष बनाएर यो सेवा उपलब्ध गराउनेछौं ।’
फिलिप्सको लुमीफाइ अल्ट्रासाउण्डमा टेली अल्ट्रासाउण्ड सिस्टम पनि रहेको जनाइएको छ । यदि स्टाफ नर्स वा अनमीलाई समस्या भएमा टेली अल्ट्रासाउण्ड सिस्टममार्फत रेडियोलोजिस्टसँग परामर्श लिन सक्ने सुविधा रहेको छ । ‘समस्या हुँदैन’, भट्टले भने, ‘तालिम दिएरमात्रै वितरण गर्छौ ।’